Mitady Fiarahamiasa Aminà Orinasa Tsy Miankina Ny Orinasam-pifandraisana Saodiana Mba Hitsikilo Ireo Mpanjifany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Mey 2013 4:34 GMT
Vakio amin'ny teny Español, عربي, русский, Français, বাংলা, English
Tamin'ny volana Martsa, nandrahona hanakatona ny WhatsApp, Skype sy ireo fampiharana hafa tsy mifanaraka amin'ny fepetra aman-dalàna Saodiana (mamela ny fanarahamaso na fitsikilovana) ny Vaomieran'ny Teknolojiam-pifandraisana sy ny Fampahalalam-baovao ary nanome fe-potoana ho an'ireo orinasam-pifandraisan-davitra mba hitady vahaolana na hakatona izy ireo. Namoaka fifanakalozan-kevitra tamin'ny alalalan'ny mailaka niarahana tamin'ny Mobily ilay mpikirakiram-pampiharana (developera) Amerikana sady mpiaro ny fiainana manokana Moxie Marlinspike raha nitady fanampiana taminy ity orinasa ity.
@moxie: Misaotra amin'ireo teny mamy sy fampaherezana avy amin'i Arabia Saodita. Raha miezaka manampim-bava anao izy ireo, mitabatabà mafy.
@FarisAbaalkhail: Tsy ny fanovana mpamatsy ny tolotra ihany no vahaolana raha voamarina fa misy izany, fa ny fanovana lalàna hiarovana ny tsiambaratelontsika sy hanamelohana fihetsika tahaka izany.
@ZajeelBird: Mitsikilo ireo olona ny #Mobily – izany indrindra no tokony hanasaziana azy ireo sy ireo izay nanome baiko, anisan'izany ny Minisitry ny Atitany.